Ungangqamanisa njani usebenzisa i-WiFi (I): Izicelo kunye neMultimedia | IPhone iindaba
Ungangqamanisa njani ngeWiFi (I): Izicelo kunye neMultimedia
Iindaba ze-IPad | | iTunes, Izifundo kunye neencwadana
Ukuba ne-iPad okanye nasiphi na isixhobo se-iOS khange silingane kufuneka uyixhume kwikhompyuter yakho ukongeza umxholo okanye uyidlulisele kwikhompyuter yakho. I-Apple kunye ne-iOS zisinika izinto ezininzi ezinokwenzeka ukuze singadibanisi isixhobo sethu ngaphandle kokusihlawulisa, kwaye siza kuhlalutya ezona zibalulekileyo.
Izicelo kunye nomxholo wemultimedia
Sele sichazile ukonwabela njani imixholo yemultimedia kwi-iPad yethu ngaphandle kokuba igcinwe kuyoKufuneka kuphela ukuba sabelane ngethala leencwadi leTunes kwaye sibe kwinethiwekhi efanayo. Kodwa ukuba sifuna ukuhambisa umxholo kwisixhobo sethu ngaphandle kwentambo, zombini imultimedia kunye nomculo kunye nokusetyenziswa kunokwenzeka nge-WiFi, apho i-iPad yethu kunye nekhompyuter ene-iTunes kufuneka zixhunywe kwinethiwekhi efanayo.
Ngethuba lokuqala sifuna ukuyivula kuya kufuneka sidibanise i-iPad kwi-iTunes ngentambo, kwaye senze ukhetho lokuvumelanisa nge-WiFi kwi-iTunes, kwi "Isishwankathelo" isithuba sezixhobo zethu.
Nje ukuba sikhethe oko, cofa kwi-Apply, kwaye siya kuba nakho ukungqamanisa kwi-iPad yethu ngaphandle kokuqhagamshela intambo.
Kwiseto> Ngokubanzi> Ukuvumelanisa nge-iTunes nge-WiFi sinamaqhosha asivumela ukuba singqamane kwi-iPad yethu. Singayenza ngenye indlela ejikelezeUkusuka kwi-iTunes sinokukhetha umxholo ukongeza okanye ukucima, kwaye ngokunqakraza Vumelanisa isenzo siya kwenziwa kwi-iPad yethu.
Ukongeza kolu khetho, kukho enye ekhululekile kakhulu, oko kukuthi ukwenza ukhuphelo oluzenzekelayo kwi-iPad yethu. Ke, nasiphi na isicelo esikhuphelayo kuso nasiphi na isixhobo esine-AppleID yethu siya kuba njalo izakukhuphela ngokuzenzekelayo kwi-iPad yethu (ukuba nje iyahambelana). Sinokhetho lokuyisebenzisa kuseto> Ivenkile ye iTunes kunye neVenkile yeApp.
Sinokhetho olufanayo olukhoyo kwi-iTunes, kwiiNqununu> Ivenkile sinokusebenzisa iinkqubo esizikhuphelayo kwesinye isixhobo esizakukhutshelwa kwikhompyuter yethu.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Isifundo sokusebenzisa i-iTunes 11 nge-iPad yethu (Icandelo lesi-4), Ukwabelana ekhaya: ilayibrari yakho iTunes kwi-iPad yakho
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » iTunes » Ungangqamanisa njani ngeWiFi (I): Izicelo kunye neMultimedia
Googling, ndiyifumene le post.
Ndiza kukuxelela elam ityala, ukubona ukuba ungasinika isisombululo.
Ndinehotele encinci enamagumbi ama-5 kuphela, kulo nyaka ka-2014, sizakubeka ii-ipad ezincinci kumagumbi. Injongo yam kukudlulisa lonke ulwazi malunga nendlu, iindawo zokundwendwela, iinkonzo, njlnjl .. ngaphakathi kwe-ipad kwisicelo se-ibook.
Amaxesha ngamaxesha, kuya kufuneka ndihlaziye ulwazi kumaxabiso, iishedyuli, njl.
Ndingayenza njani, ngaphandle kokuthatha zonke ipads kwikhompyuter yam kwaye ndizivumelanise ne iTunes?
Kungenziwa nge-wifi, kwaye ngale ndlela ukuze ukwazi ukuhlaziya konke okuqulathiweyo, iincwadi, umculo, usetyenziso, njl njl.
Umdyarho weebhayisekile, umdlalo wesithuthuthu kunye nemowudi ye-Intanethi elutha kakhulu